အထွေထွေစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ | USAHello | USAHello
Generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါပုံမှန်စိုးရိမ်စိတ်ထက်တန်ခိုးကြီး. အချိန်များတွင်စိုးရိမ်လူတိုင်း. ဒါဟာနီးပါးအခါတိုင်းဖြစ်ပျက်သောအခါမူကားစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ရောဂါဖြစ်လာ.
ထွေအုပ်ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုး. သငျသညျထွေအုပ်ရှိပါကသင်သည်အလွန်စိုးရိမ်နေကြ. စိုးရိမ်စိတ်ကလူအရေးပါသောအဖြစ်အပျက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်. လူအများစုဟာတစ်ခါတစ်ရံဒီခံစားချက်ရှိ. ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ဖို့မဆိုအရေးကြီးသောအရာများကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်, သင်ထွေအုပ်ရှိစေခြင်းငှါ, ဒီနည်းလမ်းအချိန်အများစုကိုခံစားရလျှင်.
သငျသညျကိုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များသွားကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် (အခါသမယ, အလုပ်, ကျောင်း, etc)
သင်တဦးတည်းအရာအပေါ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းကြသောအခါငါမရှာမှီး Alleha.hajs ဖို့အသုံးပြုကြောင်းအမှုအရာများဝယ်ယူစတင်စေခြင်းငှါ. ဥပမာအားဖြင့်, သင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သင့်လက်ကိုဆေးကြောသည်ဟုခံစားရပေမည်. သို့မဟုတ်သင်မထိန်းချုပ်နိုင်သောသတင်းအတွက်အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ဆိုးရွားခံစားရပေမည်.
ငါနာကျင်အတွေ့အကြုံကိုခဲ့ကြ. သင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သည့်အခါနာကျင်အတွေ့အကြုံ. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသားကောင်ဖြစ်ကြ
ရှိသမျှသည်အခြားသောစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုလိုပဲ, သငျသညျထွေအုပ်အဘို့အကူအညီတောင်းရနိုင်. အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးပြည်သူ့ထွေအုပ်ရှိသည်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကစတင်နိုင်ပါသည်. သင်အချိန်အများစုကိုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ထံမှအကူအညီတောင်းခံ.